Miady amin'ny literatiora siansa any Afrika amin'ny alàlan'ny fidirana malalaka - AfricaArXiv
navoakan'ny Johanssen Obanda & Abdullahi Tsanni on July 8 July 8
Open access (OA) dia fitsipika mifototra ary fomba fanao izay zaraina amin'ny Internet, tsy misy vidiny na sakana fidirana hafa. Ny AfricaArXiv sy ny tambajotram-pahalalana momba ny siansa afrikana (ASLN) dia miara-miasa amin'ny fampiroboroboana ny fandefasana ireo lahatsoratra ao amin'ny AfricaArXiv sy ny fandikana ireo lahatsoratra mba hahafahan'izy ireo ho mora miditra amin'ny vondrom-piarahamonina afrikanina samy hafa fiteny.
Niorina tamin'ny Jona 2018, i AfricaArXiv dia manangana tahiry fiomanana ho an'ny valin'ny akademika avy amin'ireo mpahay siansa afrikanina ary koa ny siansa tsy afrikana izay miasa amin'ny lohahevitra afrikana. Ny AfricaArXiv dia natokana hanafainganana haingana sy hanokafana fikarohana sy fiaraha-miasa eo amin'ireo mpahay siansa afrikanina ary hanampy amin'ny fananganana ny ho avin'ny fifandraisana manam-pahaizana.
Saripika: Fikarohana momba ny literatiora afrikanina
Fikarohana momba ny literatiora afrikanina (ASLN) dia fiaraha-miasa eo amin'ny mpahay siansa sy mpanao gazety, navoakan'ny Oktobra 2019 tany Nigeria TReND any Afrika, hanohanana ny serasera siantifika marina amin'ny besinimaro. Ny ASLN dia miasa mba hanairana ny saina momba ny maha-zava-dehibe ny siansa eo amin'ny fiainantsika, ny fiaraha-monina ary ny ho avy, manala ny fiheverana ny siansa ary hampiakatra ny mombamomba ny fikarohana afrikana. Ity asa ity dia manampy amin'ny fametrahana ny elanelana eo amin'ny siansa, ny fiaraha-monina ary ny politika, izay heverinay fa hanampy amin'ny fanamorana ny fisondrotan'i Afrika amin'ny maha-mpahay siansa azy. Ny tanjona farany amin'ny fikarohana siantifika dia tokony hisy fiatraikany amin'ny fiaraha-monina. Na izany aza, ny famoahana fikarohana matetika dia miafara amin'ny ambadiky ny mpandray vola, vokatr'izany, mametra ny fiantraikan'ny zavatra hita eo amin'ny fiaraha-monina. Amin'ny alàlan'ity fiaraha-miasa ity dia manantena izahay fa hampiroborobo ny fidirana fikarohana avy any Afrika sy amin'ny alàlan'ny mpanao gazetintsika, dia mampiakatra saina momba ny maha-zava-dehibe an'izany fikarohana izany amin'ny vahoaka sy ireo mpandray anjara mifanentana.
Ny fahaizana mamaky teny siansa azo raisina amin'ny fomba maro samihafa. Ny iray amin'ireto famaritana ireto dia: ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manao isan-karazany ilaina amboarina mba hikarohana, hahatakatra, handinika sy hampiasa vaovao, ao anatin'izany ny fahaizana mamantatra ireo foto-kevitra siantifika sy atiny. (Muir, J, (2016) Inona no atao hoe literatiora siansa?). Zava-dehibe ny mahatsapa ny anjara asan'ny fizarana fahalalana ara-pahalalana eo an-toerana sy ny fifandraisan'ny besinimaro amin'ny fanomanana ny olona mamaky teny sy siansa amin'ny firenena afrikanina. Ny fitsabahana iraisam-pirenena matetika no mihevitra ny fampiasana anglisy, arabo na frantsay. Saingy, ny ezaka momba ny fahaizana mamaky teny amin'ny siansa amin'ny alàlan'ny fifampiresahana am-bava, ny lahatsoratra tsotra, ny fampandehanana amin'ny fiteny eo an-toerana dia manana ny fandraisana anjara bebe kokoa, ny fifaneraserana ary ny fiantraikany. Noho izany, ny fampiasana ny fiteny eo an-toerana amin'ny tontolon'ny kolontsaina eo an-toerana dia tsy azo hamaivanina.
Ilaina ihany koa ny fahafahana hianatra maharitra mandritra ny fotoana tsy ara-potoana. Raha jerena ny fitomboan'ny anton'ny siansa sy ny teknolojia amin'ny fiaraha-monina maoderina, ny fanabeazana amin'ny fomba ofisialy dia tokony hampitaina ny ankamaroan'ny olona mba hamaky teny ara-tsiansa fa ho an'ny olona izay tsy nandray soa hatreto hatreto, ny fanontaniana dia ny fomba hamenoana ny hantsana fahalalana. Azo atao ve ny mieritreritra momba ny fampitaovana ireo olon-dehibe miaraka amin'ny 'boaty' fahalalana sy ny fahaizana momba ny siansa sy ny teknolojia? Ireo dia mety hahomby kokoa raha ny ezaka dia mifandraika amin'ny olana manokana izay mifandraika amin'ny fiainana andavanandron'ny olona sy ny vondrom-piarahamonina ao amin'ny faritra misy azy ireo. Ny fanabeazana siansa, na eo amin'ny filaharana ara-pomba sy tsy ara-potoana dia afaka mandray anjara lehibe amin'ny fahatakarana ny siansa sy ny fampiroboroboana ny siansa momba ny siansa.
Ny AfricaArXiv dia miasa hampandeha ny fikarohana interdisiplinary ao anatin'ny kaontinanta ary koa maneran-tany miaraka amin'ireo ivon-toeram-pikarohana any ivelany amin'ny alàlan'ny fanamorana ny tahiry manokana ho an'ny vondrom-pikarohana afrikanina. Ny tombontsoa bebe kokoa amin'ny tahiry fametrahana preprint ho an'i Afrika dia ahitana ny fahitana bebe kokoa amin'ny famokarana fikarohana Afrikanina, ny fisondrotana fiaraha-miasa manerana ny kaontinanta ary ny fotoana hizarana valim-pikarohana amin'ny fiteny Afrikanina.
"TReND any Afrika dia faly miditra ao amin'ny AfricaArXiv sy ASLN mba hamolavola sy hampivoatra ny serasera siantifika ary hanokatra ny siansa misokatra. Ny siansa novatsim-bahoaka dia miteraka fahalalana izay an'ny rehetra. Ny fanaovana antoka fa hifandray amin'ny mpikaroka ny famoahana ny fanomanana ny lahatsoratra sy ny fidirana an-kalalahana dia manome antoka fa ny besinimaro dia mahafantatra tsara momba ny fivoarana ara-tsiansa voalohany! Ankehitriny mihoatra ny tokony ho azo antoka aloha dia miparitaka amin'ny vaovao rehetra ny fampahalalana mba hahafantatra sy hitahiry ny tenany ho azo antoka. ” Samyra, mpandrindra ankapobeny ao amin'ny TReND
Ahoana no ahafahanao mandray anjara
Amin'ny maha mpahay siansa anao, atsofohy amin'ny iray amin'ireo sehatra telo mpiara-miasa izay iarahantsika miasa https://info.africarxiv.org/submit/
Azafady vakio ihany koa ny torolàlana fandefasana anay: https://info.africarxiv.org/before-you-submit/
Raha mankasitraka ny fampiasana ireo fiteny afrikanina nentim-paharazana amin'ny Siansa ianao dia afaka manolo-tena handika an-tsitrapo miaraka aminay abstract sy famintinana ireo sora-tanana zaraina amin'ny AfricaArXiv.
Literatiora siantifika: https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_literacy
Muir J, (2016) Inona no atao hoe literatiora siansa? - https://blogs.glowscotland.org.uk/glowblogs/eportfoliojm/2016/02/22/what-is-science-literacy/
(mpanoratra / 2017) Fahaizana mamaky siansa momba ny firoboroboana ny firenena: Fandinihana ny tany: - Famintinana tatitra, http://www.nida-net.org/documents/8/SL_Researcht_Report_Final.pdf
Sokajy:	fiaraha-miasaFomba fitenyOpen AccessOpen science
Miorina amin'ny firaisankina miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina mainty any Etazonia izahay - misy ny #BlackLivesMatter AfricaArXiv hamahana ireo fanamby ara-toekarena sy saro-pantarina ary ny fitehirizana ao amin'ny rafi-pampianarana manam-pahaizana mba hanomezana ny Afrikanina. Hamaky bebe kokoa…